22/10/2015 – Gentleman Magazine
ကမ္ဘာပေါ်က နာမည်ကြီး တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်း ၁၀ ခု
ကမ္ဘာပေါ်က ပစ္စည်းတွေမှာ အချိန်ကြာလေ ဈေးလျော့လေနဲ့ အချိန်ကြာလေ ဈေးကြီးလေ ဆိုပြီး နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ ဈေးအရမ်းကြီးတဲ့ ပစ္စည်း အမြောက်အများထဲကမှ နာမည်အကြီးဆုံး ၁၀ ခုကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁၀. Susse Freres Camera ဒီရှေးဟောင်းကင်မရာကို ၁၈၃၉ ခုနှစ်က ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇
သင် ဗိုက်နာရတဲ့ အကြောင်းရင်း ၁၂ ချက်
ချောကလက် မစ်ရှိတ်သောက်ပြီး ဗိုက်နာလာတာ ကြုံဖူးပါသလား?? ဝမ်း သုံးရက်လောက် မသွားရတာနဲ့ ဘောလုံးတစ်လုံး မျိုချထားရသလို ပြည့်အောင့်နေပါသလား?? ဝမ်းဗိုက်ပြသနာဆိုတာ မျိုးစုံရှိပြီး ဘယ်ဟာကမှ သက်တောင့်သက်သာ မရှိပါဘူး။ ဝမ်းတစ်လုံးကောင်း ခေါင်းမခဲလို့ စကားပုံ ရှိပါတယ်။ သင် ဗိုက်နာနေရင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်း ၁၂ မျိုးကို
လူနှစ်ဦးတွေ့ဆုံကြချိန်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နှိုင်းယှဉ်တတ်ကြပါတယ်။ ရိုးသားမှု၊ ဉာဏ်ရည်၊ စိတ်ရင်းစေတနာ စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကဲခတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကောင်မလေးနဲ့ ချိန်းတွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်အင်တာဗျူးဖြေတာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာနေစပြီး ဖုန်းကိုကိုင်တဲ့အကြိမ်အထိ သင်လုပ်သမျှ အမူအယာနဲ့ လုပ်ရပ်တိုင်းမှာ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို တဖက်လူက အကဲဖြတ်နေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ ဒါ့ကြောင့် ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ရာ လူတွေကြည့်ရှုအကဲဖြတ်လေ့ရှိတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လေ့လာထားဖို့